Batroolka Lifepo4, Batriyada Lithium Iron Phosphate Batteriga - Polymer
Iyada oo ku saleysan shuruudaha macaamiisha, kooxda injineeriyada ayaa doortay unugyada, naqshadeeyey BMS, waxay xireen unugyada, waxay sameeyeen baaritaannada. Waxaan ku qancinaa macaamiisheena xalka furayaasha-key. Baakad batari ah oo la Sameeyay oo ay la socdaan LG / Samsung / Sanyo / Panasonic / cell cell batari. 100% Dammaanad Sax ah. Fadlan nala soo xiriir annaga oo bilaash ah oo la socda mashaariicda baakidhkaaga.
Sida soo saare xirfadle ah waxaa jira ku dhowaad 30 injineero oo ka tirsan kooxda PLM R & D oo ay ku jiraan 5 PHD, 10 MFD iyo 15 Bachelors. Qiyaastii 30 qalabka soosaarka otomatiga ah, 25 nubit qalabka Semi-automatic iyo 8 khadadka wax soo saarka ee warshadeena.
Bixinta Waqtiga: Markaynu nahay PLM waxaan fahamsanahay in mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee macaamiishayadu ay ka doonayaan inay tahay mid waqti leh. Waxaan danaynaynaa horumarka gaarsiintayada illaa iyo tayadeenna. Tayada ugu fiican: Ballan qaadyada alaabada ugu tayada wanaagsan waa mudnaanta koowaad. Tani waa sababta aan had iyo jeer u doorto inaan maalgelino xalalka tikniyoolajiyadda sare ee xarunteenna R&D. Badeecadaha Gaarka ah: Marka lagu daro bangiga ugu caansan adduunka, PLM waxay bixisaa noocyo badan oo badeecooyin wanaagsan ah si loo daboolo baahiyaha macaamiisha iyo dalabaadka. Adeeg macmiil heer sare ah: Welwelka soo noqnoqda ee ay macaamiisheennu nala wadaagaan ayaa ah baahida loo qabo khibrad adeeg macmiil oo la isku halleyn karo waxaanan ka taxadarnaa wixii weydiin ah ka hor iyo ka gadaal iibka.
Shirkadeena ShockSpread TM
Shenzhen Polymer Battery CO., LTD waxaa la aasaasay sanadkii 2014, waa xirfadle hogaamiya soo saare batari lithium ion oo leh wax ka badan 5 sano taariikhda Shiinaha. Waxyaabaha ugu waa weyni waa batariga polymer-ka, 18650 baakad baakad ah, batari elektaroonig ah, xirmooyinka batariyada lithium ama mashruucyada batteriga ee loo habeeyay. Waxaan ku siin karnaa xalka hal-talaabo ah iyo badeecada taxanaha oo dhan laga bilaabo baytariyada illaa qaybaha batteriga sida shuruudaha macaamiisha.
Faahfaahinta alaabta: Codsiga: Alaabta guriga lagu ciyaaro ...
Tayada sare oo loo habeeyay 18650-4s 14.8v 3400mAh ...
Faahfaahinta alaabta: Qaabka: PLM18650-4S1P Magac ...
Qiimaha Warshadda UL waxay ansixisay falanqaynta 22.2v 900mah ...
Faahfaahinta alaabada: Moodeel: PLM-NH2057QE34 Batteriga ...
Batroolka smart ee 'CPAP' oo leh soosaar koronto awood ...
Iibka kulul 36V 9AH / 10Ah / 13.6Ah / 17Ah 20Ah lithium ...
Faahfaahinta alaabada: Moodel: PLM-36v20ah Battery Pa ...
Warshadda baytariga waxay si toos ah u iibisaa 5000mah 3.7v li -...
Faahfaahinta alaabada: Hordhaca alaabada ee PL ...
Tan iyo markii la aasaasay, warshaddeennu waxay soo saareysay alaabada heerka koowaad ee adduunka iyada oo adeecaysa mabda'a tayada marka hore. Wax soo saarkayagu waxay heleen sumcad aad u wanaagsan oo ku saabsan warshadaha iyo kalsoonida qiimaha leh ee macaamiisha cusub iyo kuwa duugga ah ...
Alaabooyinka ugu dambeeyay
COVID-19 wuxuu keenaa baahida bateriga daciifka ah, Sams ...
Battery.com waxay ogaatay in Samsung SDI, b ...
Northvolt, Yurubtii ugu horreysay ee shidan ...
Marka loo eego warbixinnada warbaahinta shisheeye, E ...
Kordhinta sicirka cobalt-ka ayaa dhaafay ...
Saddexdii bilood ee labaad ee 2020, wadarta impo ...